Muuji faylasha dhowaan la soo dhaafay, Word iyo Excel - Gofumed
Muuji faylasha dhowaan dhow, Word iyo Excel
Juunyo, 2011 dhowr
Had iyo jeer waxa ay inoo dhacdaa annaga, in aan ilaawin halka feylka la keydiyay. Mararka qaar waxaan ka guurnaa meel, waxaan ku fureynaa faylka galka shabakada ama si fudud mashiinka raadinta Windows-ka ah waa dhibaato.
Waa hagaag haddii faylkaasi uu ka mid yahay 50 ugu dambeeyey ee aan furnay, habka ugu dhaqsiyaha badan waa in laga arko isla barnaamijka (Word ama Excel) bandhigyada faylasha dhow.
Marka la eego waxa kaliya ee yimaado dhowr, laakiin waa la qorsheyn karaa si halkii 6 loo muujiyo in ka badan.
Si tan loo habeeyo, dooro doorashooyinka soo muuqda markaad kubadda ku riixdo.
Labadaba Word iyo Excel ama barnaamij kale oo Office ah, tani waxay u muuqataa ikhtiyaarka Heerka sare, iyo qaybta Show.
Waa suurtogal in la doorto ugu badnaan 50, inkasta oo aad arki karto qadarka la arki karo ee cabbirka miisaanka ee aan isticmaalno. Ma jiraan wax isbaaro ah.
Haddii faylka la raray, ugu yaraan waxaan haynaa fursad kale oo aan ku aragno magaca buuxa ee la jecel yahay si loo sameeyo raadin sahlan. Haddii aan badalno magaciisa, ugu yaraan waxaad garan kartaa faylka uu ku jiro.
Haddii lumay ... waa inaad ku eedeysaa fayraska.
Waxaa laga yaabaa in taladani ugu dambeysay ay tahay tan ugu caansan ee noocan ah ee boostada, in aan qoro sababtoo ah in ka badan hal mar ayaan illoobay iyo sababtaas awgeed waxaan go'aansaday inaan furo tan tag de Xafiiska dilaaga ah.
Xafiiska dilaaga ah
Post Previous«Previous KloiGoogle, xirmaan Google barnaamijka GIS aad
Post Next Abuuri mashaariicda CaalamkaNext »
4 Jawaab in "Muuji faylasha dhawaanahan, Word iyo Excel"
ELIAS isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar, 2019 at
iyo xafiiska 2010 miyaanay jirin?
Adrian Jose Frizza isagu wuxuu leeyahay:
Sebtembar, 2017 at
Waad ku mahadsan tahay, waxaan lumiyay fayl ku yaal Excel, si aan runta u sheego waa isku mid laakiin waxay ahayd mid kale oo waxa jira oo aan jirin, kordhinta akhrinta taariikhda iyo isku mid ayaa ku muuqday magaca aan ku lahaa oo hadda waxaan haystay laba isku mid ah magac !!! mahadsanid
Juan Ignacio isagu wuxuu leeyahay:
Febraayo, 2017 at
Geniooo !!! waad badbaadisay noloshayda !!!
Oktoobar, 2016 at